Ogaden News Agency (ONA) – Dargigii (The Dergue) iyo EPRDF – Wadahadal siday u taqaano Itobiya ma’aha caalamka siduu u yaqaano
Dargigii (The Dergue) iyo EPRDF – Wadahadal siday u taqaano Itobiya ma’aha caalamka siduu u yaqaano
Posted by ONA Admin	/ October 18, 2012
Itobiya lama wadahadlo, waxna laguma heshiiyo. Wuxuu dhaqanka Itobiya ku dhisan yahay in lakala adkaado oo xukuumadda markaa jirta iyo mucaaradka ka horyimaada aanay waxba ku heshiinin, oo midna adkaado midna is-diibo. Caqligaa is-adoonsiga ah oo qarniyada fog la soo factirsaday ayaa ku qafilan gaar ahaan labada qawmiyadood ee xukunka Abyssinia soo wada haystay. Sidaa darteed, waxay Itobiya u baahantahay in la fahamsiiyo macnaha uu caalamka u yaqaano wadahadal. Gaar ahaan marka qadiyad umadeed iyo masiirka shucuubta ay gumaysato laga wadahadlayo.
Itobiya waa shacab aan lahayn thaqaafad caalami ah, oo taariikhdooda waxaan ahayn aan la soconin. Oo waliba waxa lagu shubo waxaan ahayn aan rumaysan. Kuwa kolba xukunka qabsada, waxaa ka buuxa isla weyni aan sal lahayn, waxaana lagu shubaa inay shucuubta Geeska Afrika iyagu u taliyaan una talin jireen.
Hadaan taariikhda dhow ee Itobiya yarehe jaleecno, wuxuu ururkan TPLF ee talada Itobiya gacanta ku haya ogolaaday inuu wadahadal ay dawladda Talyaaniga dhex-dhexaadinaysay la galo xukuumadii Mingistu Haile, wadahadalkaa oo lagu qabtay magaalada Rome Nov. 4, 1989. Waftigii TPLF oo uu hogaaminayay gudoomiyahii G/Dhexe Meles Zanawi waxay soo jeediyeen in la dhiso xukuumad ku-meel gaadh ah (provisional government) oo dhamaan Qawmiyadaha dalka ay u dhan yihiin iyo xisbiyadii jiray oo masuuliyadooda ay noqonayso inay soo qoraan dastuur dimoqraadi ah iyo inay soo diyaariyaan doorasho xor ah. Wadahadlkii oon bilaaban ayay diideen waftigii ka socday xukuumadii Mingistu iyagoo ku andacoonaya inay matalaan dadweynaha Itobiya oo si xor ah ay ugu codeeyeen Dastuurkooda 1978, oo baarlamaan loo dhanyahay oo si xor ah loo doortay ay ka socdaan sidaa darteed ay tahay inay ogolaadaan TPLF dastuurka iyo xukuumadda sharciga ah. Laba jeer oo dambe ayay kulmeen oo marwalba xukuumadii Mingistu ay carqaladay-naysay ilaa ay TPLF ku qabsadaan Adisababa 1990. Waxaa hubaal ah hadday si niyadsami ah uga qaybgali lahaayeen xukuumadii Mengistu oo aanay isla-weynaanin in ay taariikhda dalka Itobiya majara kale qabsan lahayd.
Sidoo kale ayuu ku fashilmayay wadahaladii u dhexeeyay EPLF iyo xukuumadii Mingistu oo M/weynihii hore ee Mareykanka Mr. Carter uu dhex-dhexaadinayay.
Waxaa la yaab leh in 20tan sano ka dib ay taariikhdii dib ugu soo noqotay TPLF oy la mid noqdeen xukuumadii Mingistu ee dastuurkii ay qorteen u arkayay inuu yahay shey muqadas ah oo shucuubtii dulmigii Derg-iga diidanaa ay qasab ku tahay inay u hogaansamaan inta aan la wadahadlin. Dastuurka ay xukuumadda TPLF ku doodayaan hadda, waxaa hubaal ah hadii si xor ah loogu codeeyo oo shacabka Itobiya la weydiiyo inay diidi lahaayeen 80% wax ka badan. Sabab kasta haku diideene.
Haddii dawladda Itobiya ee TPLF markay ogolaatay in lawada hadalsiiyo iyaga iyo ururka ONLF, ay is-aaminsiiyeen in ONLF aanay waxba ka duwanayn kuwii ka horeeyay ee dhul aad beerataan iyo ururu samafal ayaa la’idinka siin Ogadenya darteed u xarooday, ama is-moodsiiyeen inay kula gorgortami doonaan kuna soo xeragalin doonaan ONLF waxaan daaqadda ka tuureynaa kuwaa iyo maamulka uga wakiilka ah Jigjiga, waxaa hubaal ah inay ku hungoobeen. Taariikhdana waxay xusi doontaa in xukunka hadda ka taliya Itobiya uu haysto wadadii xukuumadii ka horeeysay ee Mingistu.